Medjugorje: Ivan ci dice della lotta tra la Madonna e Satana | PREGHIERA&NEWS
Medjugorje: Ivan na-agwa anyi banyere ọgụ dị n’etiti Nwanyị nwanyị anyị na Setan
Paolo Tescione	Edere ya Julaị 13, 2020 Julaị 13, 2020
Ivan ahụ hụrụ ọhụụ hapụrụ Nna nke Livio nkwupụta ndị a:
Aghaghị m ikwu na Setan nọ taa, karịa ka ọ dịtụbeghị n'ụwa! Ihe anyị kwesịrị ịkọwapụta taa bụ na Setan chọrọ ibibi ezinụlọ, ọ chọrọ ibibi ndị na-eto eto: ndị na-eto eto na ezinụlọ bụ ntọala nke ụwa ọhụrụ… Achọrọ m ịsị ihe ọzọ: Setan chọrọ ibibi theka n'onwe ya.
E nwekwara nbịaru ya na ndị nchụ aja ndị anaghị eme nke ọma; ọ chọkwara ibibi ọrụ ndị nchụ aja a na-amụ. Mana Nwanyị Nwanyị anyị na-adọ anyị aka na ntị oge niile tupu Setan emee ihe: Ọ na-adọ anyị aka na ntị banyere ọnụnọ ya. Anyị aghaghị ikpe ekpere maka nke a. Anyị kwesịrị ịkọwapụta ihe ndị a dị oke mkpa: ezinụlọ 1 na ndị na-eto eto, Celsius 2 na Nzukọ.
Obi abụọ adịghị ya na ihe a niile bụ ihe ama ama pụtara ìhè nke mmeghari mmụọ ime mmụọ nke ụwa na nke ezinụlọ… N’ezie, ọtụtụ ndị njem ala nsọ na-abịa ebe a na Medjugorje, ha na-agbanwe ndụ ha, ha na-agbanwe ndụ di na nwunye ha; ụfọdụ, mgbe ọtụtụ afọ gasịrị ịlaghachi nkwupụta, bụrụ ndị ka mma ma, na-alaghachi n'ụlọ ha, bụrụ ihe ịrịba ama na gburugburu ebe ha bi.
Site na ikwuputa ngbanwe ha, ha na enyere Nzukọ-nsọ ​​ha aka, hiwe Otu Otu Ekpere ma kpọọ ndi ọzọ ka ha gbanwee ndụ ha. Nke a bụ mmegharị a na - agaghị akwụsị akwụsị rivers Osimiri ndị a nke ndị na-abịa Medjugorje, anyị nwere ike ịsị na ha "agụụ". Ezigbo onye pilgrim na-enwe agụụ mgbe niile na-achọ ihe; onye njem nleta na-ezu ike ma na-aga ebe ndị ọzọ.
Mana ezigbo onye pilgrim na-achọ ihe ọzọ. Ruo afọ iri atọ na otu nke ahụmịhe mpụta nke ngosipụta ahụ, ahụrụ m ndị mmadụ si n'akụkụ niile nke ụwa ma ana m eche na ndị mmadụ taa na-agụ agụụ maka udo, agụụ na-agụ ha maka ịhụnanya, agụụ na-agụ Chineke. mgbe ahụ ha na-agagharị na ndụ na mgbanwe a.
Dika m bu ngwa oru nke Nwanyi Nwanyi anyi, otua ka ha onwe ha g’abu akwara ya iji zisaara uwa nile. Anyị niile kwesịrị isonye na ozi ọma a! Ọ bụ ozioma nke ụwa, banyere ezinụlọ na nke ndị na-eto eto. Oge anyị bi n’ime ya bụ oge oke ọrụ
Nke gara aga Post Gara aga post:Pope Francis: "Ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwere ike ịbụ ezigbo ala"
Next Post → Post ozo:Nraranye nke Jizọs kpughere Nwanna nwanyị Pierre na ekpere nke ebube nke elu-igwe